Global Voices teny Malagasy · 23 Janoary 2018
23 Janoary 2018
Tantara tamin'ny 23 Janoary 2018
Oseania23 Janoary 2018
Fiovàn'ny Kolontsaina Fampakarambady Bangladeshi Midika Ihany Koa Ho Fiovàna Amin'ny Karazan-Tsakafo Aroso
Azia Atsimo23 Janoary 2018
Na nanomboka niova aza ny lisitry ny sakafo aroso rehefa fampakarambady Bangladeshi, zavatra iray no mitoetra tsy miova -- matsiro izy rehetra.
Mila Manome Toky Amin'ny Fanajana Ny Tontolo Iainana Ireo Mpitsidika an'i Palau Amin'Izao Fotoana
"Zanak'i Palau, raisiko ny fifanekena, amin'ny maha-vahiny ahy, mba hiaro sy hitandro ny nosinareo tsara tarehy sy tsy manam-paharoa."
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana23 Janoary 2018
Ilay Vehivavy Voalohany Voafidy Ho Filoha Tao Shily
Amerika Latina23 Janoary 2018
Nandresy tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena tany Shily i Michelle Bachelet , fiarahan'ny elatra afovoany ankavia, nahazo vato 53,49% izy niohatra tamin'ilay kandida mpifaninana taminy, ilay mpandraharaha Sebastian Piñera izay nahazo vato 46,50% avy amin'ny elatra afovoany ankavanana araka ny vokatra ofisialy
Ny 18 Septambra, hankalaza ny fitondrana miaramila Voalohany tao amin'ny firenena izay nijoro tamin'ny taona 1810 i Shily
Shily: OLPC sy ny Politika 2.0
Tena gaga ireo bilaogera Shiliana hatramin'izao amin'ilay solosaina finday 100 dolara Amerikana, OLPC. Saingy ahoana no hahatongavan'ny fitaovana vaovao, natao hamenoana ny hantsana nomerika any Shily? Inona no idiran'ny solosaina finday amin'ny politika?
Azia Atsinanana23 Janoary 2018
Afrika Mainty23 Janoary 2018
Tsy tokony hiditra an-tsokosoko ao an-tranon'ny mpanao gazety ny polisy ary managadra azy satria fotsiny hoe tsy tia zavatra voasoratra tamin'ny gazety ny manamboninahitra iray.
Arzantina, Mitohy Ny Fikarohana Ireo Zafikely Very Tamin'ny Fitondràna Jadona
Toy ny vokatry ny ezaka nandritra ny fotoana ela no nandraisana ny nahitàna ilay zafikely vavy laharana faha-127, ary fihavaozan'ny fanantenana ho an'ny fampitambarana ireo fianakaviana nosamantsamahan'ny fitondrana jadona.